FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA LHATESE - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Lhatese
Lhasa Apso / Maltese Alika mifangaro
'Mia dia Maltese / Lhasa Apso mifangaro ny dadany dia Maltese, ary ny reniny dia Lhasa. Tokony ho 5 taona eo amin'ity sary ity izy (na dia mbola alika kely aza!) Milanja efa ho 10 kilao ny lanjany. Vao 2 taona teo ho eo isika no nanana azy fa tsy afaka mieritreritra ny tsy miaraka aminy. Rehefa nahalala bebe kokoa momba ny toetrany manokana amin'ny karazany roa izahay, dia hitantsika fa ny toetrany dia mitovy taratra amin'izy ireo. Ny sasany amin'ireo toetrany Lhasa dia misy fanoloran-tena ho an'ny fianakavian'olombelona, ​​firaiketam-po amin'ireo olona fantany (sy fahaleovan-tena amin'ny olon-tsy fantatra), fahamailoana ho toy ny mpiambina sy fiarovana ny toerana heveriny ho 'fonenany', ary ny fiahiahiahy ankizy kely sy alika hafa. Ny toetrany malemy fanahy, ny fomba fitondran-tena tsara ary ny fironana amin'ny fikorisana dia ohatra amin'ny toetrany toa Maltese kokoa. Alika be fitiavana sy mamy tokoa i Mia, saingy tsy manana ny fomba filalaovan'ny alika maro amin'ny karazany mitovy amin'izany izy (na dia fantatra aza fa manana herim-po mahery vaika izy, izay handehananany manodidina ny tokontany mandritra ny minitra maromaro isaky ny mandeha!). Ankafiziny ny mandeha an-tongotra manodidina ny manodidina azy, fa afa-po tanteraka kosa izy ny mijanona ao an-trano. Amin'ny ankapobeny dia alika sy mpiara-miasa mahafinaritra tokoa izy, ary mahatsapa tena tsara vintana izahay manana azy! '
Ny Lhatese dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Lhasa Apso ary ny Maltais . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro . Ity hybrid ity dia heverina ho hafa noho ny Kyi-Leo® miteraka ary tsy afaka misoratra anarana amin'ny Kyi-Leo®Club.
Registra ny endrika mpamorona = Latese
Mpanoratra International Canine Registry®= Lhatese
Sophie the vavy Lhatese (Lhasa Apso / Maltese mix karazany) toy ny alika kely amin'ny 12 herinandro— 'Mifanena amin'i Sophie kely, teraka 28 Febroary 2016. Tian'i Sophie ny milalao miaraka amin'ny fianakaviana rehetra ary mieritreritra izahay fa mino i Sophie fa saka satria izy dia tia milalao ny tongony eo alohan'izay toy ny saka kely. Tena tsara fitondran-tena i Sophie, mora be fiaran-dalamby mampiasa ny fandriana Pee Wee Pet satria ao an-trano foana izy. Inona ny biby be fitiavana ananan'ny fianakaviana Lhatese ary i Sophie dia nanaporofo fa marina izany hatreto. '
Sosyina ny alika vavy Lhatese (Lhasa Apso / Maltese mix dog) amin'ny 7 taona— 'Tena nahafaly azy ireo Perth, tompona Aostraliana Andrefana. Karazana tsara tarehy manana toetra mahafinaritra (matetika). Tia miambina sakafo, mety ho variana nefa koa manan-tsaina. '
Sosyina ny alika vavy Lhatese (Lhasa Apso / Maltese mix dog) amin'ny 7 taona— 'Squish, mampiseho ny toetrany manahirana amin'ny fijerena totozy eo amin'ny rindrina mandritra ny adiny iray mahery ary mitsiky be ny tarehiny.'
Jake the Lhatese (Maltese / Lhasa Apso mix) amin'ny 1 taona— 'Izy no manana ny toe-tsaina mamy indrindra dia ny alika am-pofo — tokony ho eo akaikinao lalandava. Tsy azontsika an-tsaina ny fiainana raha tsy misy an'i Jake! '
miniature bear coat shar pei
Afangaro amin'ny mia ilay Maltese / Lhasa Apso amin'ny sisiny manodidina ny 5 taona eo ho eo. Maltese ny rainy, ary Lhasa ny reniny.
retriever volamena Cocker spaniel afangaro amidy
'Ity no Lhatese antsika, Elle Belle. Maltese ny rainy ary Llasa Apso no reniny. Tia ny rainy amin'ny habeny sy ny palitaony izy, fa manana ny loko sy ny toetran'ny reniny. 13 herinandro izy ary milanja 2 lbs. 9 oz. eto amin'ity sary ity. '
Goliath the Lhatese toy ny alika kely amin'ny 5 volana— 'Ity no zanako lahy Goliath. Goliath dia alika lil 'saka, tiako ny mianika eo ambony sezalà ary mipetraha eo an-damosina . Amin'ny maha olon-dehibe azy dia tena izy mafy loha , saingy tiany ny miaraka amin'ny fianakaviana raha mbola azo atao izy ary tianay koa izy miaraka amintsika. '
'Ity i Lilly my Lhatese amin'ny faha-7 volana. Maltese ny reniny ary Lhasa Apso ny rainy. Noraisinay izy rehefa feno 8 herinandro. Tena tsara izy miaraka amin'ny zanako roa sy fahafinaretana hananana. Sakanan'ny olona foana aho isaky ny manontany hoe inona ny karazana zaza satria mahafatifaty be izy. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Lhatese
braniany spaniel sy beagle mifangaro
pug king charles cavalier mifangaro
pitbull amerikana bulldog mifangaro toetra
alika fohy nafangaro Lab